Murashax C/Raxmaan Cali Giirre oo khudbad u jeediyay Taageereyaashiisa Magaaladda Hargeysa | Somaliland.Org
Murashax C/Raxmaan Cali Giirre oo khudbad u jeediyay Taageereyaashiisa Magaaladda Hargeysa
November 14, 2012	Hargeysa (Somaliland)- Murashax C/Raxmaan Cali Giirre oo ka mid ah 25-ka murashax ee xisbiga KULMIYE u soo xulay Golaha deegaanka ee caasimadda, ayaa maanta baaxadda taageereyaashiisa ku soo ban-dhiga y xaafadda Ganad ee degmadda Ibraahim Koodbuur. Halkaasi oo uu kula hadlay Boqolaal ka mid ah taageereyaashiisa caasimadda Hargeysa.
Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Kaahin Axmed, oo ka hadlay xafladaasi ayaa Taageereyaasha xisbigaasi u soo jeediyay inay ilaaliyaan nabad-gelyadda iyo anshaxa suuban ee Ololaha.
“Waxaan idinka codsanayaa inaad sidan wanaagsan ee aad ugu soo baxdeen taageeradda ololaha doorashada ee murashax C/Raxmaan Cali Giirre oo ah nin aqoon yahan ah oo aanu qabno inuu ka mid yahay shakhsiyaadka aanu isleenahay wax weyn ayay ka tarayaan horumarka caasimadda aad codkiina u hibaysaan oo aad ku dedaashaan inaad soo saartaan si uu idiinku adeego,”ayuu yidhi Guddoomiye Ku xigeenka KULMIYE.
Maxamed Kaahin waxa uu intaasi ku daray “Waa nin aqoon yahan ah oo horena kaalin wacan uga soo qaatay waxbarashada dalka oo uu ka mid ahaa aqoonyahanadii bilaabay mudada dheer wax ka dhigayay dugsiyadda caasimadda. Sidaasi darteed, waxaan idinka codsanaynaa inaad u codeysaan Murashax C/Raxmaan oo lambarka astaantiisu tahay 307.”
Murashax C/Raxmaan Cali Giirre ayaa khudbad uu u jeediyay taageereyaashiisa uga mahad celiyay siday wakhtigooda qaaliga ah ugu hureen taageeradiisa.
“Anigu waxaan ka mid ahaa markii dalka dib loogu soo noqday dadkii aasaasay dugsiyadda caasimadda waxaanan wasaarada waxbarashada ka soo shaqaynayay muddo dheer. Waxaanan dedaal u galay sidii aan aqoontayda ugu gudbin lahaa jiilka cusub,”ayuu yidhi Murashax C/Raxmaan Cali Giirre.
Murashaxu waxa uu tilmaamay in haddii uu ku guulaysto doorashadda uu dedaal u geli doono sidii uu wax uga qaban lahaa adeegyada aasaasiga ah ee caasimaddu u baahan tahay iyo kor u qaadista bilicda magaaladda.
Murashax C/Raxmaan Cali Giir waxa uu taageereyaashiisa ka dalbaday inay maalinta codbixinta doorashada deegaanka ay kalsoonidooda siiyaan, waxaanu u soo jeediyay inay xafidaan lambarka astaantiisa oo ah 307.
Murashaxu waxa kale oo uu xadhiga ka jaray xafiisyo uu ka furtay degmooyinka Ibraahim Koodbuur iyo Gacan-libaax.
Previous PostMadaxweynaha Somaliland Oo Xadhiga ka jaray Mashaariic laga fuliyay BoorameNext PostTaageereyaasha Eng. Yuusuf Warsame Siciid oo Olole Nadaafadeed ka fuliyay Suuqa Gobanimo	Blog